I-Hakuba Arboretum-I-Luxury Chalet kwi-Setting Forest
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNeil
IHakuba Arboretum yindawo entle, enamagumbi amathathu okulala etofo-tofo ebekwe kwindawo yaseMisorano kufutshane ne-Echoland, oku kukuhamba nje imizuzu embalwa. Indlu yakhiwe ehlathini kwaye ijikelezwe yimithi macala onke. Indawo yokuhlala ephezulu kumgangatho wesibini / yokutyela / ikhitshi inesilingi exhonyiweyo, kunye neefestile eziphakamileyo ezibonelela ngemibono emangalisayo yehlathi elijikelezileyo kunye neentaba. I-chalet ilala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6 ngokukhululeka kumagumbi okulala amathathu asezantsi, kwaye inamagumbi okuhlambela amabini kunye negumbi lokutyibilika / eliluncedo.
Iziphumo zentsebenziswano phakathi komnini/umyili kunye neHakuba Resort Homes, iHakuba Arboretum ikhuthaza ukusondelelana phakathi kwabemi kunye nendalo esingqongileyo. Ibekwe ngokucwangcisekileyo ukuhambelana nendawo eyingqongileyo, iifestile ezinkulu zeArboretum zenza iimbono ezintle zehlathi elingabamelwane, ngakumbi ngeefestile ezinkulu ezikwindawo yokuhlala enomgangatho wesibini. IsiNtu saseJapani shou sugi ban icandelwana lomsedare, iisilingi ezingangcoliswanga zemisedare, umgangatho wemaple, kunye ne-hemlock yokungena iqaqambisa ubuhle obukrwada behlathi. Ingqokelela ehlanganisiweyo yobugcisa bale mihla yaphakathi kwinkulungwane yamashumi amabini igqibezela umboniso ukunika iHakuba Arboretum ivibe yala maxesha. Uyilo luxhaswe likhitshi langoku, indawo yokomisa etyibilikayo etyibilikayo/igumbi eliluncedo, kunye nebalcony ebanzi yomgangatho wesibini. Ukufudumeza phantsi komhlaba kunye neeshawari zemvula ziqinisekisa iindwendwe okona kuthuthuzeleka.
Le chalet inika indawo yokomisa i-ski / igumbi eliluncedo, amagumbi okulala amathathu, kunye namagumbi okuhlambela amabini.
IHakuba Arboretum ikwindawo efihlakeleyo yehlathi iMisorano, kodwa yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukusuka kwiivenkile eziphilileyo, iibhari kunye neeresityu zase-Echoland. Indawo yokumisa iibhasi ezikhululekileyo zikwakufuphi, ivumela iindwendwe ukuba zijonge kwaye zonwabele zonke iindawo eziphambili zeski kwintlambo yeHakuba. Kukho nendawo yokupaka imoto ngaphandle kwe-chalet.
Iindawo zokuhlala zenzelwe ngononophelo ukwenzela ukuba ukuya kwiindwendwe ezi-6 ziphumle ekuthuthuzelekeni ngelixa zinandipha imibono yehlathi elijikeleze indlu macala onke. Ebusika, imbonakalo yomhlaba iguquka ibe ngumboniso ococekileyo ococekileyo. Indawo yokuphumla, indawo yokutyela kunye nekhitshi zonke zikwindawo enye enkulu evulekileyo elungele ukunxibelelana nokuba kuphekwa isidlo sangokuhlwa, ukutya kwitafile enkulu yokutyela, okanye ukuzipholela phambi kweTV enkulu enescreen esisicaba.
Ikhitshi elimilise ngo-L likwicala elinye lendlu, ecaleni kwedesika egqunyiweyo, kwaye ineseti epheleleyo yezixhobo zombane, kubandakanya indawo yokupheka yegesi, indibaniselwano yemicrowave/ioveni, kunye nefriji enkulu/ifriji. Kukwakho noluhlu olubanzi lwezixhobo zombane ezincinci ezifana ne-rice cooker, umenzi wekofu, iketile kunye ne-toaster.
Amagumbi okulala amathathu onke abekwe kumgangatho wokuqala kumgangatho osezantsi, kwaye ayafikeleleka ukusuka kumbindi wepaseji. Onke amagumbi okulala aza nebhedi ekhululekileyo elingana nenkosi enokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingatshatanga, evumela ukuba izibini ezitshatileyo zibe lula kunye neendwendwe ezingatshatanga ngokufanayo.
Amagumbi okuhlambela amabini nawo abekwe kumgangatho osezantsi, ngaphandle kweholo esembindini. Omabini amagumbi okuhlambela afakwe ngokupheleleyo kunye nezindlu zangasese zaseJapan ezikumgangatho ophezulu ezineewashlets kunye nezihlalo ezishushu, iindawo zokuhlambela kunye neeshawari zemvula. Igumbi lokuhlambela elikhulu likwafakwe ibhafu enzulu yokuphumla emva kosuku olunzima kumathambeka.
Kukho umgangatho othe tyaba wamaplanga phezulu, ofikelelekayo ukusuka kwindawo yokutyela ngeengcango ezinkulu zepatio ezityibilikayo. Ukugqunywa, idesika inika indawo entle yangaphandle yokuphumla okanye yokutyela kuyo nayiphi na imozulu.
Ngasemva kwendlu, efikelelekayo kumagumbi amabini okulala, kukho indawo enkulu yokhuni oluqinileyo enetafile yokutyela kunye nezitulo kunye neBBQ esetyenziswa kwiinyanga ezishushu.
IHakuba Arboretum ikwihlathi laseMisorano, uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya kwindawo yokutyela ephithizelayo yase-Echoland.
Inkonzo yeConcierge yoncedo ngexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 長野県大町保健所 | 長野県大町保健所指令2大保第920-53号